N'ogbe Frosted Matte iko efu kandụl ite arịa factory na-emepụta | Mmeri
1. Enwere ike ime ite kandụl ahụ site na nha na agba dị iche iche, anyị na-anabata ihe ndị ahịa chọrọ.
2. Ihe mkpuchi kandụl a na-eme site na iko frosted na mkpuchi achara, ihu elu dị ezigbo mma.
Enwere ike iji kandụl mee ihe na canive ma ọ bụ kandụl.
Zuru oke mma ụlọ maka tebụl iri nri, nke uche, tebụl dị n'akụkụ, ụlọ nri na họtel.
Nha KP4 * D8PM * H8.1CM D7.2CM * H9.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Ibu ibu 175g 225g 345g
Mkpuchi Ihe mkpuchi osisi ma ọ bụ mkpuchi achara
Agba White, nwa, isi awọ, nwere ike ahaziri
Nke gara aga: Kandụl Wick Centering Ngwaọrụ maka kandụl
Osote: Iberibe iko ite esi ísì ụtọ kandụl na achara mkpuchi
Multi-size doro anya Matte Frosted Glass kandụl ite ...